Bank of China kwupụtara na azụmahịa crypto niile megidere iwu, mmebi Bitcoin
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » Bank of China kwupụtara na azụmahịa crypto niile megidere iwu, mmebi Bitcoin
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Crime • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mgbanwe ego ego nke mba ofesi na -eji ịntanetị enye ndị bi n'ime ụlọ ọrụ ka a na -ahụta dị ka ọrụ ego iwu akwadoghị.
Ụlọ ọrụ ego na ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ na-abụghị nke ụlọ akụ enweghị ike ịnye ọrụ maka ọrụ na arụmọrụ metụtara ego mebere.
Ọnụ ego dijitalụ nke mbụ nke ụwa site na isi ahịa ahịa dara karịa 5% ruo n'okpuru $ 42,000.
Cryptocurrencies ndị ọzọ gbasoro omume na -ada ada na ether na -agbada 10% n'okpuru $ 2,800, ebe dogecoin dara karịa 8% ruo n'okpuru $ 0.20.
Banklọ akụ ndị mmadụ nke China kwupụtara atụmatụ machibido ụlọ ọrụ ego, ụlọ ọrụ ego na ụlọ ọrụ ịntanetị site n'ịkwado azụmaahịa cryptocurrency, yana ịkwado nleba anya n'ihe egwu dị na ọrụ azụmaahịa cryptocurrency.
FILE PHOTO: A na -ahụ obere ihe atụ ụmụaka na -egosi ihe ngosi ego Bitcoin mebere n'ihu onyonyo nke ọkọlọtọ China na foto atụ a, Eprel 9, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Onye na -ahazi ndị China kwughachiri nkwụsi ike ya na ego dijitalụ taa, na -ekwupụta na ọrụ azụmaahịa cryptocurrency niile bụ iwu megidere ma machibido mgbanwe mgbanwe nke mba ofesi inye ndị na -etinye ego na China ọrụ.
"A na -ahụkwa mgbanwe mgbanwe ego mba ofesi na -eji ịntanetị iji nye ndị bi n'ime ụlọ ọrụ ego na -akwadoghị," Ndi mmadu Bank of China biputere na webụsaịtị ya.
"Ụlọ ọrụ ego na ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ na-abụghị ụlọ akụ enweghị ike ịnye ọrụ maka ọrụ na arụmọrụ metụtara ego mebere," ụlọ akụ etiti kwuru.
Ntugharị a zitere bitcoin na ego ndị ọzọ mebere na -agbada. Ọnụ ego otu dijitalụ nke ụwa site na isi ahịa, Bitcoin, dara karịa 5% gbadara $ 42,000. Cryptocurrencies ndị ọzọ gbasoro omume na -ada ada na ether na -agbada 10% n'okpuru $ 2,800, ebe dogecoin dara karịa 8% ruo n'okpuru $ 0.20, dị ka webụsaịtị Coinmarketcap si kwuo.
Mkpebi ọhụrụ a na-abịa dị ka akụkụ nke mgbasa ozi steeti sara mbara nke ndị na-achị China na-emegide cryptocurrencies. Na mbido afọ a, Beijing machibidoro igwupụta ihe na nnukwu ụlọ ọrụ bitcoin, dị ka Sichuan, Xinjiang na Inong Mongolia, nke butere mbelata nke ike nhazi bitcoin, ebe ọtụtụ ndị na -egwuputa ihe wepụrụ ngwa ha na -anọghị n'ịntanetị.